Atletisma :: Medaly iraika ambin’ny folo azon’ny Malagasy • AoRaha
Atletisma Medaly iraika ambin’ny folo azon’ny Malagasy
Medaly volamena telo sy volafotsy dimy ary alimo telo no azon’ireo atleta malagasy roa ambin’ny folo niatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena, “Meeting international de La Réunion”, notanterahina tany Etang Salé, tamin’ny sabotsy lasa teo.
Isan’ireo niambozona medaly volamena i Damien Razafindrafomba, voalohany teo amin’ny 100m lehilahy (10’’77). Toy izany ihany koa i Prosper Andrianavalo­ma­laza, teo amin’ny 800m (1’55’’34), izay tonga talohan’ilay atleta malagasy iray Soazara Laivokatse Randria­nantenaina (1’55’’38).
I Mbolatiana Ramiandrisoa, nifaninana teo amin’ny 1500m (4’38’’55) kosa no niambozona medaly volamena fahatelo tamin’ity fifaninanana ity.Samy nahazo medaly vola­fotsy kosa i Embony Elodie Vanessa (100m sy 200m), izay vitany tamin’ny fe-potoana 12’’08 sy 24’’24, Sylvain Benandro (400 m: 48’’59) ary ny hazakazaka mifampitohy 4x200m, izay nisy an-dry Fanjalina, Dedy Tsaravola, Benandro Sylvain ary Nantenaina Rakotonirina.
Hanohy ny fivahinianan’ izy ireo any La Réunion amin’ny alalan’ny lasy fiofanana ireo atleta ireo mandritra ny dimy andro, mialoha ny hiverenany eto an-tanindrazana amin’ny 20 avrily ho avy izao.
Baolina lavalava – « Top 6 » :: Voahosotra ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina ny FT Manjakaray